Mamorona sary na sary mihetsika geometrika miaraka amin'ny Motion | Famoronana an-tserasera
Mamorona sary mihetsika geometrika mahafinaritra miaraka amin'ny Motion sy sary tokana
Ny fianarana milina izao dia iray amin'ireo "recette" ampiasaina indrindra hitondra an'io endrika rafitra io mba hananana valiny tena manaitra. Motion dia rindrambaiko amin'ny Internet izay ahafahantsika mamorona sarimiaina geometrika amin'ny sary tokana.
Miaraka amina sary tokana an'ity tranonkala ity antsoina hoe Motion dia afaka mamorona GIF mihetsika ary noho izany dia gaga ny olona eo an-toerana sy ny olon-tsy fantatra amin'ny tambajotra sosialy, asa an-tranonkala ary karazana vahaolana hafa izay azo antoka fa efa noforoninao. Fitaovana tsotra sy manintona ampahafantarinay anao.
Ny Motion dia mamela antsika misafidy sary hampiasaina amin'ny fianarana milina raha te hiteraka rakitra GIF izay hafanaina amin'ny fomba geometrika. Izahay dia miatrika fampiharana tranonkala tsotra fotsiny izay manadihady ny fampiasana ny fianarana milina, ny géometry ary ny horonan-tsary hanome valiny manaitra tokoa.
Mampiasa FFMPEG sy ImageMagick hanao izany majika rehetra izany ary mamokatra vokatra tena mahaliana. Satria ireo sary mihetsika ireo, tsy mila manampy intsony, dia afaka manome ny vokany mihetsika ary na ny fahatsapana ny rivotra aza dia miseho amin'ny sary sasany.
Afaka miditra Motion ianao avy amin'ity rohy ity. Izy io koa dia afaka mampiasa URL miaraka amin'ny sary sy horonan-tsary ary safidio raha toa ka te-ho GIF na sary ny valiny farany. Izy io koa dia mamela antsika hisafidy ny karazana endrika, eo amin'ny telozoro, ny telozoro, ny boriborintany ary ny rehetra, ary ny fomba kanto eo anelanelan'ny tsy misy na ny zava-misy.
Amin'izany fomba izany, azonao atao amin'ny sary mitovy io manome valiny samihafa izay mamela antsika hametraka ny lantom-peony amin'ity sary abstract tadiavinay tranokalan'ny mpanjifa ity. Rindrambaiko tranonkala lehibe iray hafa toa ilay vao natombok'i Google ary antsoina hoe Canvas izy io, ary izany dia ahafahantsika miditra amin'ny tranonkala rehetra mankany amin'ny fitaovana kaliberaly lehibe ary manome valiny lehibe ho an'ny andavan'andro amin'ny maha-mpamorona na ho mpankafy tsiro tsotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Mamorona sary mihetsika geometrika mahafinaritra miaraka amin'ny Motion sy sary tokana
Fitantanana loko ho an'ny fanontana